Manaratsy Endrika Fotsiny An’i Japana Ny Fandàvany Ny Andraikiny Naka Olona Ho Andevon’ny Filàn’ny Nofo Tamin’ny Ady Lehibe Faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2015 2:35 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, русский, Italiano, English
Ankizvavy Shinoa sy Malay nalain'ny Japoney an-keriny tany Penang hiasa ho toy ny ‘ianfu’ (andevon'ny filana ara-nofon'ny miaramila) ho an'ny miaramila Japoney. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe
Tamin'ny Ady Lehibe faharoa, vehivavy maro avy aminà firenena efa maherin'ny folo no noterena ho andevon'ny filàna ara-nofon'ny tafika imperialin'i Japana. Mba tsy dia handratra sofina loatra dia nantspoina hoe ‘ianfu’ (vehivavy mpanala fahanginana) amin'ny teny Japoney ireny vehivavy ireny, ary fototry ny resabe ara-politika nandritry ny fotoana naharitra.
Tao anatin'ny fiezahany hiaro ny maha-izy azy an'i Japana, lavin'ireo Japoney mpandinika ny tantara ny hanaiky ny tsy nety vitan'ny tafika imperialy Japoney na dia eo aza ireo porofo marobe tsy tambo ho isaina izay milaza fa voaomana ary voapetraka ara-drafitra ny fakàny andevo ho an'ny filàn'ny nofo.
Fifanakalozan-dresaka iray teo amin'ny samy mpampiasa Twitter no ahafahana mahazo topimaso amin'ireo tohankevitra nampiasaina mba hiarovana ny fomba fanao mandritry ny fotoanan'ny ady.
Milaza hadisoana iray eo ampiresahana ny fakàna andevo ho an'ny filàn'ny nofo nandritry ny Ady Lehibe Faharoa i @dragoner_jp :
Milaza ireo Japoney mpifikitra amin'ny nentin-drazana fa “tsy noterena velively ry zareo” ary mametraka ny safidin'ny tena manokana ho ivon'ilay fifanakalozan-dresaka momba ireo vehivavy mpanala fahanginana.
Na izany aza, zara raha omen'ireo Koreana lanja ny hoe noterena na tsia ireo vehivavy hiasa any amin'ireo tranon-dopy falehan'ireo miaramila nandritry ny ady, tsy misy dikany araka izany ny hisisihan'i Japana toy ny adala amin'io zavatra io.
Mahatonga ity adihevitra ity ho poakaty io.
Efa ela no nampihenjana ny fifandraisan'i Korea sy Japana ny fomba nitondràna ireo vehivavy mpanala fahanginana ireo. Nozanahan'i Japana i Korea teo anelanelan'ny 1905 sy 1945, ary somary henjankenjana ihany ny fananiham-bohitry ny Japoney tao amin'ilay firenena.
Nandritry ny Ady Lehibe Faharoa dia vehivavy an'aliny no nalain'ny manampahefana Japoney avy any amin'ireo saikinosy Koreana sy faritra hafa tao Azia mba hanao ny asan'ny vehivavy mpanala fahanginana.
Ny fomba fijery hoe lavin'ny governemanta Japoney ilay olana na toheriny mihitsy aza ny fisian'ny vehivavy mpanala fahanginana dia mitohy miteraka hetsi-panoherana any Korea Atsimo.
Mba hilazana tsotra fotsiny azy ity, ao anatin'ny ezaka hiarovana ny tafika imperialy Japoney, feno rikoriko fotsiny izao ireo olona any amin'ny firenena hafa rehefa mandre ny tohankevitra hoe “Eny eee, ekena fa nanana vehivavy mpanala fahanginana ny tafika Japoney, saingy nifaneken'ny roa tonta izany, ary tsy nisy olona noterena hirotsaka tamin'izany velively. [Amin'ny maha-teratany Japoney] tsy misy andraikitray ny amin'izany satria tsy misy idiran'ny governemantanay na ny miaramilanay.”
Ny valinteny avy amin'ireo firenena hafa dia, “Ahoana no ahazoanareo antoka fa ho resy lahatra izahay [hoe tsy nisy hadisoana vitan'ny miaramila Japoney] ny nampiasàny io làlan-kevitra io?” Mihamafy ny fahatsapàna rikoriko noho ny amin'i Japana isak'izay mampiasa io tohankevitra io ireo mpiaro an'i Japana!
Miombon-kevitra amin'izany i @boreford ary mamintina ilay fifanakalozan-dresaka :
Arakaraky ny ilazanareo fa “Tsy misy olana, satria makorelina ry zareo ireny. Sy hoe fifanarahan'olon-tsotra no nitondra azy ireny, fa tsy ny miaramila Japoney,” no vao mainka manaratsy endrika anareo.
Tsy manaiky kosa i @raise9393 ary ao anatin'ny fizotry ny resaka dia manolotra ohatra tsara indrindra amin'ny fifikirana aminà fomba fisainana tsy ampy fandinihana :
Amin'ny teny hafa, ny dikany ho anareo dia hoe noararaotina ireo vehivavy mpanala fahanginana, toy ireo mpiasa any amin'ny toeram-piasàna tsizarizary (fanandevozana) ary nampiasaina toy ny “andevon'ny filàna ara-nofo”?”
Ara-dalàna ny fivarotan-tena tamin'izany fotoana izany, ary nahazo vola be ireo vehivavy mpanala fahanginana. Ankoatra izay, nijery manokana ny fomba fitondra azy ireny ny miaramila, toy ny fahazoana antoka fa aminà toerana madio no anaovany ny asany. Mbola ratsy lavitra noho izany ny fepetra iasàna any amin'ireo toeram-piasàna tsizarizary, [ratsy lavitra noho ny miaramila Japoney].
@dragoner_jp namaly bontana :
Ny tohankevitra [ataonao anatin'ny bitsikao eto] dia tena izay tsapako noresahako mihitsy, ary tena ireo karazana tohankevitra izay mahatonga ny olona any amin'ny firenena hafa ho rikoriko [amin'i Japana]:
RT@raise9393 @dragoner_JP @tsuyup Ara-dalàna ny fivarotan-tena taminì'izany fotoana izany, ary nahazo vola be irao vehivavy mpanala fahanginana. Ankoatra izay, nijery manokana ny fomba fitondra azy ireny ny miaramila, toy ny fahazoana antoka fa aminà toerana madio no anaovany ny asany. Mbola ratsy lavitra noho izany ny fepetra iasàna any amin'ireo toeram-piasàna tsizarizary, [ratsy lavitra noho ny miaramila Japoney].